Fiambenan’ny Media Sosialy Ny Fifidianana Manan-tantara Ao Pakistana… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2013 10:08 GMT
Raharaha henjana ny fifidianana any Pakistana. Nifarana niaraka tamin'ny fifidianana tamin'ny 11 may 2011 ny dimy taona nitondran'ny governemantan'ny fampihavanana voafidy ara-demokratika izay notarihan'ny Antokom-Bahoaka ao Pakistana. Saika isaky ny nisy fifidianana tany aloha tany, mihiaka fifampiangàna sy fifanendrikendrehana ho nisy hosoka sy fanodinkodinana hatrany ireo antoko, manome làlana ho an'ny herisetra.
Saingy mifanohitra amin'ny lasa, fony ny ankabeazan'ireo Pakistane salantsalany tsy maintsy nihafy tamin'ireo media nahazatra mba hahazoany izay vaovao azo raisina sy handrafetany ny fanehankeviny, novain'ireo media sosialy ny fandehan-javatra. Misy andiany iray tsy mitsaha-mitombo mahazo vaovao bebe kokoa eny amin'ireo vahoaka mpikirakira teknolojia izay mampiasa ny Facebook sy Twitter.
Vovonana roa vaovao ao amin'ny aterineto any Pakistana no manandrana mampiasa ireo media sosialy mba hanaraha-maso ireo fifidianana hoavy mikasika ireo tsy fanarahan-dalàna sy herisetra, ary koa mba hanomezam-baovao ny vahoaka mikasika ny fizotry ny fifidianana.
Antontanisan'ny mpifidy. Sary torohay natolotry ny Pak Votes.
Pak Votes (Mifidy i Pak)
Sehatra iray an'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra hanarahana maso ny fifidiananany Pak Votes (Anglisy, Urdu). Fandraisan'andraikitra izay mikendry ny hanomezan-danja ny feon'ny olom-pirenena amin'ny alàlan'ny median'olon-tsotra mba hisiana safidy iray hafa itantaràna ny fifaninanana ara-pifidianana ny taona 2013.
Ny fampiasana ireo fitaovan'ny media sosialy, mamporisika ny fisokafana izy amin'ny fandraisana anjaran'ireo olom-pirenena ary manandrana ny hanolotra fanampim-panazavana ara-potoana sy matotra. Ny tanjona dia ny hampitomboana ny fiheverantenan'ny mponina ho tompon'ny rafitra demokratika.
Ny vavahadibe mitondra fanavaozana nentin'ny fampitam-baovaon'olom-pirenena dia mikendry ny handrisika ny olom-pirenena tsotra mba haneho ny heviny amin'ny fifidianana ho avy, hitanisa ireo fanitsakitsahana atao ny Fitsipi-pitindrantena mialoha, mandritra sy aorian'ireo fifidianana ho avy, ary koa hitatitra ireo tranganà herisetra na fanodinkodinana.
Ilay tetikasa dia nanofana mpanaramaso eny an-kianja miisa 40 avy any amin'ireo faritra faran'ny lavitra sy mitokana be indrindra sady ireo tena tandindonin'ny herisetra manerana an'i Pakistana. Ireompanaramaso eny an-kianja ireo dia mitatitra ny olana ara-pifidianana amin'ny fotoana tena itrangany ho ao amin'ilay sehatra avy any amin'ireny faritra lavitra ireny, izay nataon'ny media mahazatra tsinontsinona tamin'ny ankapobeny. Aseho an-tsarintany eto ireo tatitra ireo.
Nianiana hifidy ny PTI ny tompona fivarotana iray. Nalefan'i PakVotes ho an'ny fampielezankevitry ny iVote ity sary avy amin'ny @SoofiaSays ity
Ohatra, olon-tsotra nofanin'ny PakVotes ho mpanaramaso avy any Quetta, Balochistan, nanambara hoe :
Tsy manana Kara-Panondrom-Pirenena any aminy ny ankamaroan'ireo vehivavy. Na ry zareo tsy manana karapanondro mihitsy, na ny vadiny na ny rainy no mitàna azy. Manery azy ireo hivoaka ivelan'ny dingam-pifidianana izany ary koa, lasa tsy manan-kambara mandritra ny fizotran'ny fifidianana
Ankoatry ny fanaraha-maso, ilay vovonana dia mamondrona bilaogy, ampahan-dahatsoratra fanehoankevitra, ary ireo fandalinana avy amin'ny olon-tsotra ao amin'ny tranonkalan'ny PakVotes. Nanoratra i @wordoflaw ao amin'ny lahatsoratra ‘Wattan Ya Kaffan’:
Tena zava-doza kokoa, misy fifidianana roa mampiahiahy any Pakistana. Ny iray fifidianana izay mifantoka amin'ny kabary tsara lahatra sy “Pakistana Iray Vaovao”. Ny hafa, fifidianana izay andraisan'ny ANP anjara, manaitra ny olana hoe mba hsian'ny “Pakistana Iray Vaovao”, tsy maintsy mitohy ny fisian'ny Fanjakan'i Pakistana. Ary io Pakistana io indrindra no iharam-panafihana.
Sabir Nazar, mpanao sariitatra, manao sary ho an'ny PakVotes. Pakistana Vaovao vs Pakistana Tranainy .
Azo arahaina ao amin'ny Facebook sy ny Twitter (@pakvotes) ilay tetikasa. Raha ao Pakistana ianao ary vavolombelona manatri-maso tranganà herisetra, na toy inona endriny, na toy inona, tatero ao amin'ny izany amin'ny fandefasana SMS amin'ny 0334-40-2222-4, mandefasa mailaka ho an'ny report@pakvotesmap.pk, na fotsiny mandefasa bitsika ho an'ny @PakVotes.
Pak Voter (Mpifidy ao Pak)
Mamela ny olom-pirenena Pakistane hahafantatra mikasika ny fifidianana sy ny fizotry ny fifidianana avy amin'ny media sosialy ity sehatra ity mba handrisihana azy ireo hivoaka handatsa-bato. Mamoaka vaovao sy rohy ny Pak Voter mba hisian'ny fanapahan-kevitra voalanjalanja tsara mikasika ny fifidianana, izay manolotra ny vaovao amin'ny fomba tsy miandany sy tsy manao politika.
Tsy manomboka ary tsy mifarana miaraka amin'ny fifidianana io dingana io — ezaka mitohy sy mila fandraisana andraikitra mandritra ny fotoana maharitra avy amin'ny vahoaka Pakistane, tsy hoe fotsiny hifidy, fa mijoro ho vonona mavitrika hatrany aorian'ny fifidianana ary mitazona ireo nandresy ho tomponandraikitra mandritra ny fotoam-pitondràny.
Mpandray fitenenana tamin'ny fanomezam-baovao voalohany momba ny fifidianana nataon'ny Pak Voter ny 7 may 2013. Sary an'i Faisal Kapadia
Nazavain'i Sidra Rizvi, mpanoratra, ao amin'ny bilaoginy ny antony maha-zavadehibe ny mifidy :
Ny fampiasana ny latsabatontsika dia zavatra izay tsy maintsy ataontsika rehetra. Raha tsy mifidy isika, ny olona tsy tokony ho eo amin'ny fahefàna no handresy. Handrotsa-bato ho azy ireo ny mpomba azy. Ary na tsy nifidy na iray aza tamin'ireo aza isika, hahazo andraikitra indray mandeha ry zareo. Tsy izay ve no ezahantsika hovàna? Tsy tokony hifidy ary ve isika, raha tsy hifidy olona iray, ary hanampy mba tsy hifidianana olona iray izay hita fa tsy hahavita akory?
Ny sehatra fifanakalozan-dresaka iray ampiantranoin'ny @pakvoter ao amin'ny Twitter no lohahevitra laharana voalohany any Pakistà ao ambanin'ny tenifototra #letsvote , na ‘ndeha isika hifidy’ amin'ny 8 May 2013 :
@FarriRizvi (Farheen Rizvi): ny làlana sy banky no vaindohan-draharahan'ny governemanta voafidy. Ny governemanta voafidy no tokony hiantoka ny fiarovana ny fampiasàm-bola eo am-toerana/avy any ivelany @pakvoter
@RJ_kulsoom (Umme Kulsoom): Tsy mahalala ny biraom-pifidiananareo ve ianareo? Hamarino eto androany http://www.norbalm.com/pakistan-elections-urdu/… ary #letsvote ndeha isika hifidy amin'ny 11 may. #pakvoter @pakvoter
@PakVoter (Pak Voter): Tsy azon'ny saina takarina ny tsy fandraisana anjara amin'ny dingam-pifidianana ka avy eo hipetraka sy hitsikera. tsy maintsy mandeha mandatsa-bato ianao! #letsvote
@rraheelNJ (Rizwan Raheel): @PakVoter @faisalkapadia latsabato tokana dia afaka mampitongilana mizàna, ary mety ho ny anao izay. Ampiasao ny zonao hisafidy izay heverinareo fa marina…..
@hiranazam: Mifidiàna. Na dia heverinareo fa tsy misy dikany aza ny latsabatonareo. Na dia mahatsiaro aza ianao fa ho voahosihosy izy. Na dia eritreretinao fa hosoka aza ny fifidianana. Mandehana. Mifidiana. #LetsVote
Afaka hita ao anaty Facebook sy ao amin'ny Twitter (@pakvoter) ity fanentanana ity.
Niaraha-nanoratra tamin'i Qurratulain Zaman ny lahatsoratra